Sangano reCancer Association of Zimbabwe rinoti kubva kutanga kwemwedzi waGumiguru, madzimai nevarume vanodarika zana pazuva vakange vachiongororwa chirwere chegomarara repazamu pamahofisi avo emuHarare.
Mukuru wesangano iri Amai Junior Mavhu vaudza Studio 7 kuti chirwere ichi ndicho chirwere chechitatu pamagomarara ese anobata madzimai muZimbabwe.
Amai Mavhu vanoti paongororo yavakaita mwedzi uno, kune vanhukadzi nevanhurume vakati wandei vakawanikwa vaine mapundu mumazamu airatidza kuti vaikwanisa kunge vaine gomarara repazamu.
Vakurudzirawo vose vane hama dzakamborwara negomarara repazamu kuti vaende kunovhenekwa sezvo mukana wekuti vabate chirwere ichi unenge wakakura.
Amai Mavhu vanoti chirwere chegomarara repazamu chinorapika kana madzimai nevarume vakauya kuzoongororwa nguva iripo.
Mumwe chiremba Doctor Precious Rutendo Nhokwara-Matenda vanoti vanhu vanofanira kuziva zvekutarisa kana vachida kuona kuti vabatwa negomarara here zvakafanana nemapundu mumazamu uye mwambabvu muhapwa.
Vatiwo kana varume vanokwanisawo kubatwa negomarara repazamu. Mumwe chiremba Doctor Bennadert Ndoro vanotaurawo nezvemagomarara ari kuuraya vanhu munyika.
Mukuru weCancer Registry kuParirenytwa Hospital VaEric Chokunonga vanotiwo chirwere chegomarara chiri kuwanda chaizvo munyika vakatsinhirawo mashoko ataurwa naAmai Mavhu ekuti madzimai mazhinji anozouya kuchipatara chirwere chakomba.
Amai Mavhu vari kukurudzira vanhu kuti vauye kuzoongororwa mwedzi waGumiguru usati wapera nokuti chirwere ichi chinorwadza uye chinodhura zvakare kurapa.